Yunteng Tripod အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
အကောင်းစား Tripd လေးကို Rocketတွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ
အမြင့် ၄ပေ ရှည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုသလို ချိန်ငြိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားဖို. ခေါက်သိမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးလုပ်ရန်၊ ဖုန်းကို ထောင်ထားရန်
​ဈေးနှုန်း – 32000
အမြင့်​ – ၄ပေ
အမည်: Yunteng Tripod